Smashwords – Ireo Izay Miavonavona – a book by Dag Heward-Mills
Ireo Izay Miavonavona
Ny avonavona dia poizina mahafaty izay nahavoa ny olombelona mandritry ny taona maromaro. Satria tsy mety hita, dia avonavona dia mahavita miteraka fahavoazana lehibe. Ahoana no ahafahantsika miady amin' ireo loza eo amin' ny fiainantsika? Amin' ny vaksinin' ny fanetren-tena! Ny Fanetren-tena dia hatsaran-toetra ara-panahy manan-danja. Vitsy ireo olona mahasahy manoratra mikasika ity hatsaran-toet More
Ny avonavona dia poizina mahafaty izay nahavoa ny olombelona mandritry ny taona maromaro. Satria tsy mety hita, dia avonavona dia mahavita miteraka fahavoazana lehibe. Ahoana no ahafahantsika miady amin' ireo loza eo amin' ny fiainantsika? Amin' ny vaksinin' ny fanetren-tena! Ny Fanetren-tena dia hatsaran-toetra ara-panahy manan-danja. Vitsy ireo olona mahasahy manoratra mikasika ity hatsaran-toetra ara-panahy mahavariana nefa manan-danja ity. Ao anatin' ity boky vaovao mahafinaritra ity,dia mampiharihary ireo endriky ny avonavona maro i Dag Heward-Mills. Ity boky mahery vaika, nosoratan' ny namana Kristianina nitolona mafy ity, dia hitahy anao sy hamporisika anao hampandroso ny fanetren-tenan' ny Jesosy Kristy tahaka ny ankizy kely.
Tags: madagascar daghewardmills malagasy malagache fahatokiana